Si dhakhso leh u nuqul oo u kaydi Sawirrada iyo Qoraalka macruufka 15 Jiid & Hoos | Wararka IPhone
Miguel Hernández | 15/10/2021 15:00 | macruufka, macruufka 15, iPhone, Casharrada iyo buugaagta
macruufka 15 Waa nidaamka hawlgalka ee shirkadda Cupertino oo heshay dhaleecayntii ugu badnayd sannadihii la soo dhaafay, ma jiraan dad adeegsadayaal ah oo ka gudbay cusboonaysiintaan "hal -abuur yar", dhab ahaantii, sicirrada soo -dejinta ee macruufka 15 ayaa ah kuwa ugu caansan xusuusta. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waxay tahay in macruufka 15 ay ku jiraan waxyaabo badan oo cusub oo nolosheenna fududaynaya.
Waxaan ku tuseynaa sida loo isticmaalo Jiid & Hoos -u -dhigga macruufka 15, oo ah astaamo kuu oggolaanaya inaad nuqul ka sameysato oo aad dhejiso qoraalka u dhexeeya codsiyada, sidoo kale ka soo dejisan karto sawirro badan Safari. Xeeladahaan fudud waxaad awoodi doontaa inaad u isticmaasho iPhone -kaaga ama iPad -ka sida xirfadle run ah.
1 Nuqul oo ku dheji qoraalka Jiid & Dhicis
2 Nuqul ka samee oo ku dheji sawir leh Jiid & Dhicis
3 Ka soo dejiso sawirro badan Safari
Nuqul oo ku dheji qoraalka Jiid & Dhicis
Mid ka mid ah shaqooyinka Jiid & Hoos -u -dhac yar ayaa si sax ah u ah nuqul ka samee oo dheji qoraalka, aniga ahaanna waxay iila muuqataa sida ugu faa'iido badan. Nuqulidda iyo dhejinta qoraalka iyadoo la adeegsanayo Drag & Drop waa mid aad u fudud, waxaan ku tusaynaa:
Xulo qoraalka aad rabto inaad nuqul ka sameyso, qoraallo buuxa iyo weedho. Si aad tan u samayso, laba jeer ku dheji qoraalka oo dhaqaaji dookhaaga.
Hadda si adag / dheere ugu dul qor qoraalka (3D Touch ama Haptic Touch).
Markii aad dooratay, adigoon sii deynin, kor u sii mari (kor mari).
Hadda gacanta kale waxaad ku dhex socon kartaa macruufka, labadaba adoo adeegsanaya baarka hoose oo aad u aadi doonta arjiga aad rabto, adigoon sii deynin qoraalka.
Hadda dooro sanduuqa qoraalka ee arjiga aad rabto iyo marka sumadda (+) ay ka muuqato cagaar, sii daa
Taasi waa sida ugu fudud ee aad nuqul u qori karto oo aad ugu dhejin kartid qoraalka u dhexeeya codsiyada kala duwan.
Nuqul ka samee oo ku dheji sawir leh Jiid & Dhicis
Mid kale oo ka mid ah suurtagalnimada weyn ee nidaamka Jiid & Dhibic ee macruufka 15 ayaa si sax ah u ah si aad u awooddo inaad u qaadato oo aad u keento sawirrada codsiyada si fudud noo xiiseeya.
Xulo sawirka aad rabto inaad nuqul ka sameyso. Si aad tan u samayso, si adag / dheer ugu riix sawirka (3D Touch ama Haptic Touch).
Wakhtigan, haddii aad rabto, waxaad ku dari kartaa sawirro badan adiga oo gacanta kale ku dhejinaya
Hadda waad dhex mari kartaa macruufka, labadaba adoo adeegsanaya baarka hoose oo aad u aadi doonta arjiga aad rabto, adiga oo aan hoos u dhicin qoraalka.
Hadda dooro arjiga meesha aad rabto inaad ku nuquliso sawirka ama sawirrada sawirrada iyo marka astaanta (+) ay ka muuqato cagaar, sii daa.
Ka soo dejiso sawirro badan Safari
Tani waxay iila muuqataa aniga oo aan shaki ku jirin mid ka mid ah shaqooyinka waaweyn, waana taas waxaad awoodi doontaa inaad kala soo degto inta sawir ee aad rabto Safari adigoon mid mid u soo degsan.
Tag Sawirada Google oo raadi waxaad rabto. Si aad tan u samayso, si adag / dheer ugu riix sawirka (3D Touch ama Haptic Touch).
Hadda waxaad si toos ah ugu aadi kartaa dalabka Sawirrada macruufka, labadaba iyada oo loo marayo Multitasking iyo si toos ah boodhka. Xusuusnow, adiga oo aan sii deynin sawirrada la guuriyey.
Hadda dooro arjiga meesha aad rabto inaad ku nuquliso sawirka ama sawirrada sawirrada iyo marka astaanta (+) ay ka muuqato cagaar, ku daadi sawirrada la koobiyeeyay barnaamijka Sawirrada.
Aad bay u fudud tahay khiyaamadan cusub si aad sawirro badan ugala soo degto macruufka 15.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Si dhakhso leh u nuqul oo u kaydi sawirrada iyo qoraalka macruufka 15 Jiid & Dhicis
Dhibaatada ka haysata Jon Stewart waa taxanaha ugu daawashada badan ee aan laga qorin Apple TV +